December 2020 - Page 11 of 11 - Sainpwar
တစ်ယောက်တည်းကြိတ်ခံစားနေရှာတဲ့ သားဖြစ်သူကိုမကြည့်ရက်တော့ဘဲ နောက်ကွယ်က အမှန်တရားတွေကို မြင့်မြတ်ရဲ့မိခင်ပြောပြလာပါပီ…..
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင်မင်းသားမြင့်မြတ်ကတော့ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ထိပ်တန်းကရပ်တည်နိုင်တဲ့ မင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် ပကာသနတွေကင်းကင်းနဲ့ နေထိုင်တတ်တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေတစ်ခဲနက်ချစ်ခင်အားပေးနေကြသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ မြင့်မြတ်ကတော့ လတ်တလောမှာ မိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အထင်လွဲမှုတွေကို ခံနေရကာ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေအားလုံး သိရှိကြမှာပါနော်..။ အဆိုပါကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအားပေးနားလည်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရှိကြသလို အကြောင်းစုံသေချာမသိဘဲ ဝေဖန်အပြစ်တင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သားဖြစ်သူအတွက် မြင့်မြတ်ရဲ့မိခင်က ကိုယ်တိုင်ရှေ့ထွက် ဖြေရှင်းလာပါတယ်နော်..။ တစ်ယောက်တည်းကြိတ်ခံစားကာ ပရိသတ်တွေအထင်လွဲတာခံရနေရတဲ့ သားဖြစ်သူကိုမကြည့်ရက်တော့ဘဲ အမှန်တရားကိုဖြေရှင်းပြောပြလာတာဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ မြင့်မြတ်ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဂျူးဂျူးပန်ထွာက […]
ငွေကျပ် သိန်းပေါင်း ခြောက်သောင်းကျော်ကို သေတမ်းစာနှင့်လှူခဲ့တဲ့ မေမေဂျယ်လီအချိုရည် ကုမ္ပဏီမှ ဦးဟန်ဝင်းစိုး
ငှကပွေသြိနြးပေါငြး ခှောကသြောငြးကွောကြို သတမြေးစာ နှငြ့လှူခဲ့တဲ့ မမဂေယွေလြီအခွိုရညကြုမျပဏီမှဦးဟနဝြငြးစို မမဂယှေလွေီအခှိုရညွ ကုမပြဏီမှ ဦးဟနဝွငွးစိုး ဖှဈပါတယွ။မမလေေူမှုကူညီရေးဖောငဒွေးရှငွးဟာ ရရှေားပါးဒသမှေားကိုရရရှေိရေး၊ပညာရေးကနွှးမာရေးစောငွ့ရှောကွ မှု၊ ကှောကကွပနွှငွ့အသညွးလှူဒါနွးမှု၊ သှေးလှူဒါနွးမှု လိုအပျသောအသငျးအဖှဲ့မြားသို့ ထောကျပံ့ကူညီမှုသဘာဝဘေးအန်တရာယျခံရခွငျးမြားအတှကျ လှူဒါနျးမှုမြား အပွငျ….. မနျတလေးမှို့ပေါြ ဆေးရုံကှီးမွားတှငြ တနငြျဂနှနေေ့တိုငြး ဆနပြှုတသြာကူ၊ရနှေေး၊ ရသနြေ့မွားကိုလှူဒါနြးပေးနပှေီး အဆိုပါလှူဒါနြးမှုမှာ လစဉကြပွငြှသေိနြးတဈရာဖိုးဖှဈတယခြငဗြွာ။ zawgyi ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ခြောက်သောင်းကျော်ကို သေတမ်းစာ နှင့်လှူခဲ့တဲ့ မေမေဂျယ်လီအချိုရည်ကုမ္ပဏီမှဦးဟန်ဝင်းစိုး မေမေဂျယ်လီအချိုရည် ကုမ္ပဏီမှ ဦးဟန်ဝင်းစိုး ဖြစ်ပါတယ်။မေမေလူမှုကူညီရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာ ရေရှားပါးဒေသများကိုရေရရှိရေး၊ပညာရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် […]
အောက်လမ်း ဆရာ ကြောက်သော ထယ်သွား၌ ကပ်မြေကြီးနှင့် ဘုရားဂုဏ်တော်အစွမ်း
Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္ “ေအာင့္တယ္…ေအာင့္တယ္”ဟူ၍ေအာ္ေနေသာ ေမာင္ေက်ာ္မိုး၏ ေအာ္ေနေသာအသံသည္ စူးနစ္စြာထြက္ေပၚလာ၏ ေမာင္ေက်ာ္မိုး၏ဖခင္နွင့္အကိုျဖစ္သူတို႔မွာ ေျခမကိုင္မိလက္မကိုင္မိျဖစ္ေနႀကသည္။ ေမာင္ေက်ာ္မိုး၏ေအာ္သံမွာလည္းပို၍က်ယ္လာျပီး ေအာ္သံစိပ္လာသျဖင့္ အိ္မ္နီးခ်င္းမ်ားမွအားလုံးဝိုင္းအုံလာႀကသျဖင့္ ဘသူတို႔အိမ္တြင္လူမ်ားျပည့္က်ပ္သြားသည္။ တစ္ေယာက္ကေျပးေခၚသျဖင့္ဗိေႏၷာေဆးဆရာႀကီး ဦးျဖဴသီးေရာက္လာျပီး တိုင္းရင္းေဆးမ်ားတိုက္ေျကြးေသာ္လည္း အေအာင့္ကမေပ်ာက္သျဖင့္ျမိဳ႕ေဆးရံုသို႔ပို႔ရန္အႀကံေပးႀကေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ဦးသုတဆြမ္းခံျကြလာ၏ အိမ္ထဲသို႔ဝင္လိုက္သည္နွင့္ေမာင္ေက်ာ္မိုးမခ်ိမဆန္႔ေအာ္လိုက္ေသာအသံမ်ားကဆီးျကိုလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေႀကာင့္သပိတ္ခ်ျပီး လူနာထံျကြသြား၏အသင့္ခင္းထားေသာေနရာေပၚထိုင္ျပီးသည္နွင့္အက်ိဳးအေႀကာင္းေမးေလ၏ “ေမာင္ေက်ာ္မိုးဘာေရာဂါျဖစ္တာလည္း”ဟုေမးေလသည္ မည္သူမွဦးေဆာင္၍ေျဖသူမရွိ ေမာင္ေက်ာ္မိုး၏ဖခင္မွ ဗိုက္ေအာင့္တာပါဘုရားဟုေျဖးေျဖးေလးျပန္ေလွ်ာက္၏ ဆရာေတာ္မွ“ေရာဂါေႀကာင့္လား မတည့္စာ စားမိလို႔လား” ထိုအေမးကို မည္သူမွေျဖသံမႀကား သူတို႔မ်က္နွာမ်ားမွာဘေႀကာက္လန္႔ေနသည့္လဏၡာေတြ႕ရသည္ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ေမာင္ေက်ာ္မိုး၏အကိုျဖစ္သူမွရဲဝံ႕စြာ “ေဝဒနာေႀကာင့္ပါဘုရား ေဝဒနာမွရိုးရိုးေဝဒနာမဟုတ္ပါဘုရား” […]
ကြည့်ရှု့သူ 17သိန် းကျော်သွားပီဖြစ်တဲ့ တောသဘာဝ လှပျိုဖြူတို့ရဲ့လုံးဝ ဥသုံ ဘုတ်ဆုံ အထင်မကြီး ရုပ်သံ
အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင် ကြည့်ပါ ဒီတစ်ခါလာပြန်ပီဗျာ အတွင်းကြေးသီချင်းပီးတော့ လုံးဝဥသုံ ဘုတ်ဆုံးအထင်မကြီးဘူး ဆိုတဲ့သီချင်းလေးနဲ့ ကျေးလက်တောရွာက ကောက်စိုက်သမလေးတေ ခေတ္တနားတုန်းလေး အပျင်းပြေသီဆိုကခုန်နေကြတဲ့ ဗွီယိုဖိုင်လေးပါ။ တစ်ကယ်တော့ တောင်သူလယ်သမားတေဘဝဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ နေစဉ်စားသုံးနေတဲ့ ဆန်စပါးတွေကို စိုက်ပျိုးပေးနေတာဟာ ကျေးဇူးရှင်တောင်သူလယ်သမားတို့သာဖြစ်ပါတယ်။ လူဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်လို့မရပါ။ ကုန်သည်ပွဲစား ပညာရှင် အလုပ်သမား လယ်သမား စသည် စသည် အပြန်အလှန်မှီခိုနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကြီးတိုးတက်ဖို့ ချမ်းသာဖို့ ဆိုရင် လယ်သမားတေရဲ့ဘဝတေ […]
ခ်စ္သူေကာင္မေလးကို ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္ေနေပမယ့္ ပစ္ပစ္ခြါခြါ လမ္းခြဲခံလိုက္ရတဲ့ေကာင္ေလး (႐ုပ္သံ) မိန္းကေလးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ့သေဘာသဘာဝအရ ျဖစ္ခ်င္တာ ၊ ရခ်င္တာေတြကို တြယ္ဝိုက္ၿပီး ခ်စ္သူေတြထံေတာင္းဆိုတတ္ၾကပါတယ္ ။ ေကာင္မေလးေတြက မရခ်င္ဘူး ၊ မလိုပါဘူး လို႔ေျပာလိုက္တဲ့စကားမ်ိဳးေတြကို အေျခအေန ၊ အခ်ိန္အခါမၾကည့္ဘဲ ယုံစားမိခဲ့ရင္ေတာ့ အရိပ္အကဲမသိဘူးလို႔ေျပာရမွာပါပဲ ။ ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း စင္ကာပူနိုင္ငံက ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူမရဲ့ခ်စ္သူေကာင္ေလးကို Valentine ေန႔အတြက္ ဘာပစၥည္းလက္ေဆာင္မွမလိုခ်င္ပါဘူးဆိုၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ေကာင္မေလးက […]
“မိဘခြေရာ တောင်းယူလိုသူများအတွက်”မိဘခြေရာခံယူနည်း မိဘခြေက္ခဏာ ခံယူပွဲသည် မြန်မာတို့၏ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အလေ့အထ တစ်ခုဖြစ်၍မြန်မာ မိသားစုတိုင်း ခံယူကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။ကျေးဇူးရှင် မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးနှင့်ကုံလုံ ဆရာတော် ဘုရားကြီးတို့၏မိဘခြေရာ တောင်းယူပူဇော်နည်းမှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိဘခြေရာ တောင်းယူသောနေ့ဟာမိဘရော သားသမီးတွေပါ မင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့ (သို့မဟုတ်) မွေးရက်နှင့်မှတ်တမ်းအပ်သည့်နေ့များတွင်ကျင်းပလျှင် ပို၍ကောင်းမွန်၏။မိဘခြေရာတောင်းယူ မည့်အချိန်မှာမိဘကော သားသမီးပါ ရေချိုးသန့်စင်ပြီးသန့်ရှင်းသောအဝတ်များ ဝတ်ဆင်ပြီးဘုရားစင် ရှေ့မှာထိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတွေမှာအရပ်လေးမျက်နှာ၊အရပ်ရှစ်မျက်နှာ၊အရပ် ဆယ်မျက်နှာရှိတဲ့ အထဲမှအထက်အရပ်ရပ်ကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီးရတနာသုံးပါးကိုပူဇော်ကန်တော့ပါ။ ပြီးလျှင် အရှေ့အရပ်မှာ […]
ဆောင်းတွင်းမှာ အသားတွေမပက်စေဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ
ပုံမှန်အတိုင်း နှုတ်ခမ်းနီလေးတစ်တောင့်လောက် အိတ်ထဲဆောင်ထားပြီး ဂျင်းထည့်လို့မရတော့ဘူးနော်။ နေကာမျက်မှန်လိုမယ်၊ လည်ပင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပဝါလေးဘာလေးလိုမယ်၊ ကဲ…. မိန်းကလေးတို့ရေ။ ဆောင်းတွင်းရောက်တော့မယ်ဆိုတာကို ဆောင်းလေတဖြူးဖြူးလေးက မနက်မနက်ဆို အချက်ပေးနေပြီနော်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ဆောင်းတွင်းရောက်လာမှာကိုကြောက်တဲ့ ပျိုမဒီလေးတွေရှိနေမှာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆောင်းတွင်းမှာ အသားတွေပက်ပြီး အလှတွေပျက်တတ်လို့ပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့် ဆောင်းရာသီမှာ အသားမပက်ဖို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ Skin Care မလဲ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ၁။ ရေများများသောက်ပါ။ ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ အပြင်မှာလည်း ရာသီဥတုအေးတော့ ရေများများမသောက်ဖြစ်ဘူးလေ။ […]
၂၀၂၁-ခုနှစ် တနလာၤသားသမီးများအတွက် (၁)နှစ်စာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်းနှင့် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များ .
၂၀၂၁-ခုနှစ် တနလာၤသားသမီးများအတွက် (၁)နှစ်စာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်းနှင့် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များ တနလာၤသားသမီးများ အိမ်တွင်းရေး|လူမူရေးကိစ္စများကြောင့် ခေါင်းကိုက်ရူပ်ထွေးနေရတတ်ပြီး|မိမိဆန္ဒမိမိသဘောနဲ့လုပ်ဆောင်ခွင့်မရပဲ|ထိန်းချုပ်များစွာတွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဟာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်|ကိုယ့်စွမ်းကိုယ်စများအသုံးချပြီး ကျော်ဖြတ်နိုင်မှသာ အောင်မြင်မှုရရှိမဲ့နှစ်တစ်နှစ်ပါ။ အလုပ်အကိုင်မှာ ထင်သလောက် အဆင်မပြေပဲ ပြဿနာများ ရူပ်ထွေးနေရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာတွေတခုလာတိုင်း|ပြဿနာနောက်က အောင်မြင်ခြင်းနှင့် လာဘ်လာဘ ပါလာတတ်တာကို သင်မမေ့ပါနဲ့|ထို့ကြောင့်ပြဿနာကို ရဲရင့်စွာစဉ်းစားရင်ဆိုင်သင့်ပါတယ်။ ဖခင်ကျမ်းမာရေးညံနေတတ်ပါတယ် ကျမ်းမာရေးမှာတော့အာရုံကြောအားနည်းခြင်း|ဦးခေါင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါ|ကိုက်ခဲခြင်းများဖြစ်တတ်ပြီး အစာအဆိပ်သင့် အစားမှားခြင်းများလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် ပညာရေးမှာ အတော်ကြိုးစားမှတော်ရုံကျပါမယ် အပေါင်းအသင်းကြောင့်အပျက်စီးနေတတ်ပါတယ် အချစ်ရေးမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အူတိုမှုများ ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီး မကြာခဏ စကားများနေရတတ်ပြီး […]
ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီးပရဟိတအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ဂေဟာမှာပင်စင်ထုတ်ပြီးပြီးချင်း လာရောက်လှူဒါန်းသွားတဲ့အသက် (၈၂) နှစ်အရွယ် အဘိုး…
သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေကတော့ လူတကာမလုပ်နိုင်တဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက သူမကိုယ်တိုင်လည်း ပရဟိအလှူတွေကို လိုက်လံပြုလုပ်နေသလို အလှူရှင်တွေတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်း လေးလေးစားစား ကျေးဇူးတင်စကားပြောလေ့ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးဘာသာ အသက်အရွယ်မရွေး ရိုသေလေးစားပြီး ပျူပျူငှာငှာဆက်ဆံတတ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေက ဒီကနေ့မှာလည်း သူမရဲ့ ဂေဟာကို လာသမျှ အလှူရှင်တွေထဲက ထူးခြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေက “ပင်စင်ထုတ်ပြီးတာနဲ့ တန်းလာလှူပေးတဲ့ အသက်(၈၂) နှစ် အဘိုးရဲ့ အလှုလေးပါရှင်။ ကလေးတွေ […]